Ultraviolet index: kedu ihe ọ bụ, njirimara na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Ofdị radieshon dị iche iche sitere na anyanwụ ruru ụwa anyị. Otu n'ime radiations ndị a bụ ultraviolet. Ọ ultraviolet ndeksi Ọ bụ ọ̀tụ̀tụ̀ ịdị ukwuu nke radieshon nke ultraviolet nke pụrụ iru n’elu ụwa. Anyị maara na anyanwụ na-ewepụta ụzarị ọkụ n'ọtụtụ mbara igwe dị iche iche. Kpọmkwem, ọ na-ewepụta oke radieshon na mpaghara ultraviolet. Nke a radieshon dị ezigbo mkpa ebe ọ dị mkpa, ma dịkwa egwu.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a iji gwa gị gbasara njirimara na mkpa niile nke ultraviolet index.
2 UV Mmebi Index
3 Indkpụrụ Index UV
4 Ihe iji belata radieshon ultraviolet
Anyị ekwuola na ndepụta nke ultraviolet bụ ihe ọzọ karịa oke nke ike radiesịọn nke nwere ike iru elu ụwa. A na-ekewa radieshon niile nke anyanwụ na-ebute n'akụkụ dị iche iche nke ụdị igwe eletrọnetik. A na-ekewa radiesị Ultraviolet na mpaghara 3 dabere na ike ya. A na-akpọ ụzarị ultraviolet kachasị ike dị ka UVC ma ha na-arụ ọrụ na nrịgo nke sitere na 100-280 nm. Ogologo ọkụ UVB sitere na 280-315 nm. N'ikpeazụ, ụzarị UVA bụ nke dịkarịrị njọ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ma nwee mpaghara nke ụdịdị electromagnetic sitere na 315-400 nm.
Akụkụ kachasị emerụ nke radiesị ultraviolet bụ radieshon UVC. Radiationzarị ọkụ a, anaghị eru elu ụwa ma ọ bụrụ na ikuku anyị na-ekpuchi ya. Karịsịa, akụkụ buru ibu nke radieshon a na-etinye obi na oyi akwa ozone. Otú ọ dị, Ejiri ọkụ UVB na ikuku 90% ihe dị ka. Ọ bụ ezie na UVAs na-etinyekwa uche n'ụzọ dị ala karị, otu akụkụ ha ruru elu anyị.
Anyị maara na ụzarị anyanwụ dị mkpa maka mmepe ndụ dịka anyị si mara ya. Ọ ga-echeta na photosynthesis na osisi na-ewe ebe ekele ihe nke ultraviolet ụzarị na ụmụ mmadụ kwesịrị igosipụta ìhè anyanwụ iji mepụta vitamin D na akpụkpọ ahụ. Enweghi vitamin nke a n’arụ nwere ike ibute ụkọ mineral n’ọkpụkpụ. Ya mere, ọ dị mkpa ịnwụ anwụ kwa ụbọchị ọ dịkarịa ala ọkara elekere. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị nwere ngosipụta gabigara ókè na mpụta nke ụzarị ọkụ ultraviolet ndị a, ọ nwere ike imerụ ahụ ike. Ma ọ bụ na radieshon ultraviolet nwere ike imebi collagen nke anụ ahụ ma nwekwuo ịka nká.
UV Mmebi Index
Ihe nnochi anya nke delta violet bu nke na-anwale ogologo ndu na oke na ike nke radieshon nke nwere ike iru iru elu uwa. Agbanyeghị, radieshon ultraviolet nwere ike ibute mmebi DNA na mmụba. Enwere otutu ihe omumu site na omumu nke gosiputara na o puru ime ka oria cancer cancer. N'otu aka ahụ, ọ nwere ike ibute nnukwu nsogbu anya dịka ọrịa anya. Enwere ụdị anụ ahụ dị iche iche ma ụfọdụ na-enweghị nsogbu karịa ndị ọzọ. Nghọta nke ụzarị ultraviolet nke anụ ahụ na-adabere n'ihe a maara dị ka phototype. Phototype na-ahu maka inyocha ikike nke akpukpo aru mmadu iji maa radieshon nke igwe. Nke ahụ bụ, ike nke anụ ahụ iji mepụta melanin. A ga-amata akara ngosi violet mara nke ọma iji mara nchebe anyị ga-etinye na akpụkpọ ahụ maka radieshon nke anyanwụ dị ka uche anyị nwere. Ndị isi na-acha uhie uhie ma ọ bụ ndị na-acha odo odo na-ama mmetụta karịa brunettes.
Ihe a na-akpọ ultraviolet index bụ maka ịlele njupụta nke radieshịọn ultraviolet nke ruru n'elu ụwa n'oge ogologo ọ bụla nke ịdị arọ ya na-emerụ na ụmụ mmadụ. Ndị ọkà mmụta sayensị gburugburu Canada webatara ndepụta a na 1992. Site ebe ahụ, ọtụtụ mba webatara akwụkwọ nke ha ruo mgbe ndị WHO webatara ọkọlọtọ ọkọlọtọ maka ụwa.
Indkpụrụ Index UV
Ntughari UV nwere uru kacha nta nke 0 ma enweghị oke uru. Indexkpụrụ ọkọlọtọ bụ nke na-enye anyị ohere ịme amụma dị iche iche nke UVI yiri ya gburugburu ụwa. A na-eji agba agba iji gosipụta mbido mbụ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ụkpụrụ UVI dị ala n'etiti 0 na 2, odo maka ụkpụrụ UVI dị oke n'etiti 3 na 5, oroma nwere nnukwu ihe egwu n'etiti 6 na 7 na-acha uhie uhie maka ụkpụrụ UVI dị oke elu nke dị n'agbata 8 na 10. N'ikpeazụ, kwa A na-achọta odo odo maka ụkpụrụ UVI dị oke na ọnụ ọgụgụ karịrị 11.
Dabere na uru nke UVI ma dabere na ụdị akpụkpọ onye ọ bụla, afọ, wdg. Ekwesiri ime ihe zuru oke iji kpuchido radiesị ultraviolet. UVI dabere na ihe ole na ole ma nwee ike ịgbanwe n'afọ niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ dabere na ole ozone dị kọlụm ikuku, elu anyanwụ, ịdị elu nke ebe anyị nọ na igwe ojii nọ na ozugbo. Ya na ịnọ n’elu ugwu abụghị otu ihe karịa ịnọ n’elu ugwu. Ọnụ ọgụgụ nke radieshon nke ga-emetụta akpụkpọ anyị na-agbanwe agbanwe nke ukwuu. Otú ahụ ka ọ dịkwa eziokwu banyere ozone oyi akwa. Oghere ozone ahụ dị egwu bụ n'ihi mbelata nke ịta ahụhụ nke ozone stratospheric ma ugbu a, ọnụọgụ dị elu nke radieshon nke ikuku ultraviolet na elu anyị.
Ihe iji belata radieshon ultraviolet
Anyị ga-enye ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa iji nwee ike ichedo onwe anyị megide ihe radieshon ultraviolet na akpụkpọ anyị:
Belata ikpughe anwụ n'oge oge kachasị ike n'ụbọchị. Ndị a bụ oge awa nke ọnụ ọgụgụ nke radieshon nke ultraviolet kachasị ukwuu.
Na-eje ije na ndò na etiti awa nke ụbọchị. Dị nnọọ ka anyị ga-ezere ikpughe onwe anyị nye anyanwụ nke etiti oge, ọ bụrụ na anyị enweghị ụzọ ọzọ, anyị ga-aga ndo.
Yiri uwe nchebe
Yiri okpu sara mbara iji kpuchie anya gị, ihu gị, na olu gị.
Chebe anya anyị na ugogbe anya maka anwụ
Jiri ude nchara nchebe mbara igwe sara mbara.
Zere akwa tanning
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere ndepụta nke ultraviolet na mkpa ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ntughari Ultraviolet